Heres the Trailer for Season 6 of Orange Waa Madow Cusub - Dhaqanka Pop
Orange waa Maxaabiista Cusub ee Madow ee ku sii Jeeda Max Maxaad ee Xilliga 6 -aad
Fiidiyowga ka fog Netflix
goormaa la sameeyay masduulaagii kubbadda z
The trailer ee xilli lixaad ee Jaalle Waa Madow Cusub ayaa yimid, isaga oo xiddigaha bandhigga gadaal ka dhigay baararka cusub.
*Digniinta Qaswadaha: Haddii aadan arag xilli 5 halkan joog.*
Xilligii shanaad ee taxanaha taxanaha ahaa ee Jeenji Leslie Kohan ayaa taageerayaasha ka yaabiyay waxa ku dhici doona maxaabiista xabsiga Litchfield ka dib markii ay istaageen rabshado xilli-dheer socday. Rabshadihii xabsiga, oo ka dhashay geeridii lama filaanka ahayd ee Poussey (Samira Wiley), waxay ku dhammaatay qaybtii ugu dambaysay ee gabdhihii xilliga basaska oo laga kaxeeyay xabsigii ay ugu yeereen guriga tan iyo markii bandhiggu markii ugu horraysay la sii daayay 2013. Gaadhkan cusub, ugu dambayntii waxaannu helnay basaskaasi waxay ku socdeen: xabsi ammaan oo ugu sarreeya.
Xabsiga cusub, dumarka OITNB waxay isku arkaan isbahaysiyo cusub oo ku salaysan midabka labiskooda, iyo inay la qabsadaan nolosha qaar ka mid ah dadka la wada deggan. Aad bay uga duwan tahay halkan. Gabdhahani waa cilmi nafsi, Lorna Morello (Yael Stone) ayaa ku leh bilowga isjiidka. My bunkee, waxay samaysaa afar saxarood maalintii.
Tilmaan -bixiyaha, mas'uuliyiinta Litchfield ayaa si gooni gooni ah u wareysanaya haweenka, iyagoo isku dayaya inay ogaadaan cidda ay ku soo oogayaan hoggaaminta rabshadaha, halka ay kuwa kale ku cadaadinayaan inay saaxiibbaddooda u beddelaan heshiis qirasho. Baadhitaanku wuxuu cadaadis saaraa saaxiibtinimadii hore wuxuuna ka dhigayaa qof walba inuu isweydiiyo cidda uu aamini karo. Mararka qaar waxaan la yaabanahay kooxda aad runtii ku jirto, ayay tiri Lorna.
Si shaki leh, Alex ayaa ka maqan isjiidka iyo xabsiga cusub. Ma iyadu bay Piper iyo hablaha kale soo gelisay? Waa hagaag waa inaad sugtaa oo ogaataa.
sida loo sameeyo sanduuqa isku darka cake dhadhan guriga lagu sameeyo
Xilliga lixaad ee showga Netflix wuxuu soo baxayaa July 27.
sida loogu dhawaaqo yves saint laurent
xasilisay kareemka karbaashka barafaysan oo aan lahayn gelatin
maxaad dib ii dishay yaroo macnaheedu yahay
halkee baan ka iibsan karaa ukumaha la kariyey?